အတွေးအခေါ်ဆန့်ကျင်မှုများ Correos 2022 updated သူတို့ကိုအသစ်ထပ်မံရယူပါ! | ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လေ့လာမှုများ
၏ထုတ်ဝေပြီးနောက် Correos ၏အတိုက်အခံများ၏ကြေငြာချက်လျှောက်လွှာတင်ရန်အချိန်တန်ပြီ။ တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် Correos သည် ၀ န်ထမ်းများ၏ပျမ်းမျှသက်တမ်းကိုလျှော့ချရန်အတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာစာမေးပွဲများအတွက်ခေါ်ဆိုမှုအသစ်များကိုပြုလုပ်နေသည်။ ထို့ကြောင့် Correos ကိုဆန့်ကျင်မှုများကိုစတင်လေ့လာရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။ သင်ပိုမိုလေ့လာလိုပါကဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုပြောပြပါမည်။
ပြင်ဆင်ထားသော Correos ဆန့်ကျင်ရေးအစီအစဉ်များ
အောက်ဖော်ပြပါစာတိုက်အစီအစဉ်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသည့်အထုပ်အပိုးအားလုံးကိုသင်အကောင်းဆုံးစျေးကွက်ပေါက်စျေးဖြင့်ပိုမိုလွယ်ကူစွာအတည်ပြုနိုင်အောင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ၉၅% ကျော်ဖြတ်သန်းသွားတယ် Correos ကိုဆန့်ကျင်မှုကကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ခံတယ်!
၎င်းသည်ဈေးအသက်သာဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပြီးပြည့်စုံဆုံးဖြစ်သောကြောင့် Correos မှပြင်ဆင်ထားသောအစီအစဉ်နှင့်အတူ volumes နှစ်ခုကိုလက်ခံရရှိခြင်းအပြင်သင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
Premium pack သည်စာမေးပွဲအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်လိုသူများအတွက်ဖြစ်သည်။ ငွေစုအစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်သည့်အပြင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအပိုဆောင်းစီးရီးများကိုလည်းသင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
သင်စာသင်ရမည့်အချိန်ပေါ် မူတည်၍ အကယ်၍ သင်က ၃ လ (သို့) ၁၂ လအထိကျောင်းတက်ခွင့်ရလိမ့်မည်။
အကယ်ဒမီ ၃ လနှင့်အတူ Premium Pack
ဤအစီအစဉ်များကိုသင်စိတ်မဝင်စားပါကသင်တစ် ဦး ချင်းလိုအပ်သည့်ထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်ယူရန်အခွင့်အရေးလည်းရှိသည်။ ဤရွေ့ကားရရှိနိုင် options များဖြစ်ကြသည်:
အစီအစဉ်များသာဖြေ - ဒီစာတိုက်ရုံးကအစီအစဉ်တခုလုံးကိုနောက်ဆုံးခေါ်ဆိုမှုအထိတင်တယ်။
လှောင်ပြောင်စာမေးပွဲဖြေ - စာမေးပွဲကိုအရိုးရှင်းဆုံးနဲ့အထိရောက်ဆုံးနည်းနဲ့လေ့ကျင့်ပါ။
psychotechnics သွားစာအုပ်များအဆင့်အတန်းကောင်းကောင်းရဖို့အတွက်နည်းလမ်းကဖြစ်နိုင်သမျှစာမေးပွဲအားလုံးကိုလုပ်ဖို့ပါ။ မင်းဘာစောင့်နေတာလဲ?
Post-op အတိုက်အခံများအတွက် 2020 ခေါ်ဆိုခ
Correos သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၏ခေါ်ဆိုမှုအတွက်နေရာ ၃,၄၂၁ ကိုဆင့်ခေါ်ခဲ့သည်။ ဤနေရာများအားလုံးသည်အမျိုးသားရေးနယ်ပယ်ကိုတိုးပွားစေသည်ဟုဆိုရမည်။ ထို့နောက်သင်သွားရပါလိမ့်မည် Correos ၏အတိုက်အခံများ၏ကြေငြာချက် နှင့်ပြည်နယ်တစ်ခုချင်းစီအတွက်ရာထူးရှာဖွေတွေ့ရှိ။
ခေါ်ဆိုမှုဖွင့်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့အားစောင့်ကြိုနေသောစာမေးပွဲကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်သည်။ အကြောင်းဖြစ်သည် တ ဦး တည်းဘုံစမ်းသပ်မှုနှစ်ခုတိကျတဲ့သူတွေကိုဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ခွဲခြားခြင်းနှင့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်နှစ် ဦး စလုံး။ ပထမ, ဘုံစမ်းသပ်မှုသည်မေးခွန်း ၆၀ ၏ရွေးချယ်မှုဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုအပေါ်အခြေခံသည်။ ၎င်းတို့အနက်မှ ၁၀ ခုသာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းပညာဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤသို့လုပ်ရန်ပြိုင်ဘက်တစ် ဦး စီတွင် ၅၅ မိနစ်ခန့်သာရှိသည်။ တိကျသောစာမေးပွဲများသည်ရွေးချယ်မှုများစွာရှိသည်။ သို့သော်ဤကိစ္စတွင်မေးခွန်း ၄၀ လောက်ရှိပြီးပြိုင်ဘက်များရရှိနိုင်သောအများဆုံးအချိန်မှာ ၃၅ မိနစ်ဖြစ်သည်။
သငျသညျရှောက်သွားလျှင် စာမေးပွဲနှင့်ဖျက်သိမ်းရေးအဆင့်သို့ဖြစ်လျှင်သင်၏အရည်အချင်းများကိုအကဲဖြတ်သည့်အဆင့်ရောက်လာလိမ့်မည်။ ရမှတ်၏တန်ရာအချို့မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
စာတိုက်မှလုပ်သက်စီနီယာ။ ပြီးခဲ့သည့်7နှစ်တာကာလအတွင်းကျင်းပရန်ရာထူးမည်သို့ပင်။
အုပ်ချုပ်ရေး၊ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ စီးပွားရေး၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံတို့တွင်တက္ကသိုလ်ဘွဲ့သို့မဟုတ်အဆင့်မြင့်ပညာအဆင့်အတန်းများသင်ကြားခြင်း။
ခွင့်ပြုချက် A သို့မဟုတ် A1,3မှတ်။ ကားမောင်းခွင့်လိုင်စင်ပဲ။
အနည်းဆုံး ၁၈ နှစ်ဖြစ်ပါစေ အသက် ၆၅ နှစ်ပြည့်ပြီးသူမဟုတ်ပါ။
စာတိုက်မှလူတစ် ဦး ဖြစ်ရန် A, A1 သို့မဟုတ် B ကဒ်ပြားကိုသင်လိုအပ်သည်။
Correos ၏အတိုက်အခံများအတွက်ရေးထိုးထားသည့်စာများကို၎င်း၏တရားဝင်စာမျက်နှာမှတဆင့်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ လျှောက်လွှာကာလပြီးဆုံးသည်နှင့်အွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်နိုင်သည်။ မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက်သင်သည်အဆင့်များစွာကိုလုပ်ဆောင်ရမည်။
သငျသညျ Correo.es ၏စာမျက်နှာရိုက်ထည့်ပါလိမ့်မယ်သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည် 'ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်'၊ 'လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်'၊ 'အလုပ်အကိုင်' နှင့်နောက်ဆုံးတွင် 'သတ်မှတ်ထားသောကိုယ်ပိုင်လုပ်သားဝင်ငွေ' သို့သွားလိမ့်မည်။
နောက်တစ်ဆင့်မှာ“ လျှောက်လွှာမှတ်ပုံတင်ခြင်း” ဖြစ်သည်။ ဤကဏ္တွင်ဝက်ဘ်ကသင့်အားကမ်းလှမ်းသည့်အဆင့်များအတိုင်းသင်၏ ID နှင့်စကားဝှက်ကိုထည့်ရမည်။
တတိယအဆင့်မှာ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဖုံးအုပ်ထားပါ။ ၎င်းတို့အားလုံးမှန်ကန်ကြောင်းအမြဲတမ်းစစ်ဆေးပြီး privacy မူဝါဒကိုဖတ်ရန်မမေ့ပါနှင့်။
မသန်စွမ်း မှတ်ပုံတင်ခြင်းပြီးဆုံးပြီမင်းပေးရမယ် 13 ယူရိုဖြစ်ကြောင်းနှုန်းထားများ။ ဟုတ်တယ်၊ ၁၀ ယူရိုမကုန်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့သူတို့တက်သွားကြတယ်။ ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းသည်ကဒ်ဖြင့်ဖြစ်သည်။ ငွေပေးချေမှုကိုအတည်ပြုပြီးပါကသင်တောင်းဆိုသည့်အမှတ်အသားနှင့်ငွေပေးချေမှုအထောက်အထားကိုသင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
အခြားစာရွက်စာတမ်းအမျိုးအစားများနှင့်သင်၌ရှိသည့်ခေါင်းစဉ်များသည်ဤအချက်၌မလိုအပ်ပါ၊ သို့သော်အနာဂတ်အဆင့်များတွင်လိုအပ်သည်။ ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်ရန်အတွက်သင်သည်ယခင်တောင်းဆိုမှုကိုဖျက်သိမ်းပြီးအသစ်တစ်ခုထပ်မံဖြည့်ရမည်။
အမှန်တရားမှာလစာကိစ္စသည်မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာနောက်ဆုံးကိန်းဂဏန်းအမြဲကွဲပြားနိုင်သည်ဟုဆိုရပါမည်။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အပိုလစာ၊ လုပ်သက်၊ ရာထူးနှင့်အခြားအချက်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သို့သော်သင့်အားအကြံဥာဏ်ပေးရန်ခန့်မှန်းခြေပမာဏရှိသည်။
အမှုဆောင်အရာရှိ။ ဤ ၀ န်ထမ်းအမျိုးအစားများအတွင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခြယ်လှယ်သူ၊ ဘာသာပြန်သူ၊ မိုဘိုင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ အော်ပရေတာနှင့်စသည်တို့ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ သူတို့အားလုံးမှာလစာယူရို ၁၃၀၀ မှ ၁၅၀၀ အထိရှိသည်။
အခြေစိုက်ရုံးအရာရှိဖြေ - ဒီ ၀ န်ထမ်းတွေရဲ့လစာကနည်းနည်းလေးနည်းတယ်။ ဒါပေမယ့်နည်းနည်းကွဲပြားတာမှန်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကယူရို ၁၂၀၀ မှ ၁၄၀၀ ကြားမှာပြောနေတာပါ။ ၎င်းသည်အခြေခံသို့မဟုတ်ပုံမှန်လစာဖြစ်သည်။
ခွဲဝေခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးန်ထမ်း။ ခရိုင်ရဲ့အကြီးအကဲရော၊ ခွဲခြားသူရောခြေထောက်ပါဖြန့်ချိမှုနှစ်ခုလုံးက ၁၁၀၀ ကနေ ၁၃၀၀ ကြားလစာရှိတယ်။ အငယ်တန်းန်ထမ်းများကဲ့သို့တူညီသော။
လက်ထောက်ဝန်ထမ်း။ ဤကိစ္စတွင်လက်ထောက်ဝန်ထမ်းများသည်လစာ ၁၀၈၀ နှင့် ၁၂၀၀ ကြားရလိမ့်မည်။
Correos အတိုက်အခံများ၏သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်သင်သိသင့်သည့်ဘုံအကြောင်းအရာ ၁၃ ခုပါဝင်သည်။
ခေါင်းစဉ် 1- သာမန်နှင့် / သို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်ထားသောစာတိုက် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်သူတို့ရည်ညွှန်းသည့်ထုတ်ကုန်များ။
ခေါင်းစဉ် 2- အီး - ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်ချောထုပ်အပိုင်းကိုအာရုံစိုက်သည်။
ခေါင်းစဉ် 3: စီးပွားရေးတန်ဖိုးများနှင့်အခြားအပိုဆောင်းများအပြင်ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများ။
ခေါင်းစဉ် 4: အလုပ်ကျွမ်းကျင်မှုအမျိုးမျိုး, စာတိုက်များတွင်ဆောင်ရွက်သောအလုပ်။
ခေါင်းစဉ် 5: ဒစ်ဂျစ်တယ်စီမံခန့်ခွဲမှု - ဒေတာနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု Correos ။
ခေါင်းစဉ် 6: အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အမျိုးမျိုးသောထုတ်ကုန်များ။
ခေါင်းစဉ် 7ဖြေ - ၀ င်ခွင့်လုပ်ငန်းစဉ်။
ခေါင်းစဉ် 8အထုပ်များကုသခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစည်းမျဉ်းများ။
ခေါင်းစဉ် 9: ပေးပို့ခြင်း protocol ကို။
ခေါင်းစဉ် 10: Corporate material (PDA's, IRIS နှင့်အခြားသောအလုပ်များစွာသည်သူ၏ရာထူးရှိလုပ်သား၏စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်သို့မဟုတ်သူလုပ်ဆောင်သောလုပ်ငန်းများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာများ)
ခေါင်းစဉ် 11: ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူနှင့်ကုသမှု။ ကုမ္ပဏီ၏ပုံသဏ္benefitsာန်ကိုအကျိုးပြုမည့်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောကုသနည်းကိုအတူတူပင်နှင့်ဆက်ဆံမှု။
ခေါင်းစဉ် 12စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုမ္ပဏီ၏ဥပဒေရေးရာမူဘောင်နှင့်လိုက်နာရမည့်စီးပွားဖြစ်မဟာဗျူဟာ။
ခေါင်းစဉ် 13။ လိင်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သောဥပဒေဆိုင်ရာဗဟုသုတများအကြားတန်းတူညီမျှမှုသတ်မှတ်ချက်များ။ ငွေကြေးခဝါချခြင်းနှင့်ပွင့်လင်းမြင်သာခြင်း၊ ကျင့်ဝတ်နှင့်ဆိုင်သောကတိက ၀ တ်နှင့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကာကွယ်ခြင်း။
ဤအကြောင်းအရာများအားလုံးသည်ဘုံ (သို့) သီအိုရီဆိုင်ရာအပိုင်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်အပြင်, သင် psychotechnics ရှောက်သွားရပါလိမ့်မယ်။ ၎င်းအတွက်သင့်တွင်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းစာအုပ်များရှိသည်၊ ၎င်းသည်အမြဲတမ်းခေတ်မီနေသောအပြင်သင်နှင့်သင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းပညာကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်သင်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးနှင့်အတူလည်းရှိသည်။ အချို့နှင့်အတူလေ့ကျင့်ရန်မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့် လှောင်ပြောင်စာမေးပွဲရွေးချယ်မှုစာမေးပွဲအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းအတွက်သင့်အားအထောက်အကူဖြစ်စေမည့်အခြားအမျိုးအစားများအပြင် သီးခြားစီအတူတကွ၎င်းတို့သည်သင်၏နေရာရရန်အတွက်ဘက်ထရီများကိုတပ်ဆင်နိုင်သည့်ပြီးပြည့်စုံသောရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။
Correos တွင်အလုပ်လုပ်ခြင်း၏အားသာချက်များစွာရှိသည်။ ဒါဟာပြည်နယ်များကကမ်းလှမ်းသောဆန့်ကျင်သည်။ ဒါကြောင့်သင်ကစားနိုင်သည့်နေရာသာမကသင်၏နေရာကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ သူ၏လစာမှာအတော်အတန်သင့်တော်သောကြောင့်၎င်းသည်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အခြားအားသာချက်များလည်းဖြစ်သည်။ ကတည်းကအနိမ့်ယူရို 1000 ကျော်သွားပါလိမ့်မယ်။
သူတို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်အခါဖျော်ဖြေခံရဖို့အလုပ်အချိန်ဇယားလည်းအရေးကြီးလှသည်။ အပြည့်အဝသို့မဟုတ်အချိန်ပိုင်းဖြစ်ခြင်း။ နှစ် ဦး စလုံးအဘို့အရရှိနိုင်သောနေရာများအမြဲရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ် ဦး ရင်ဆိုင်နေရပြီထင်ရပေမည် တည်ငြိမ်အလုပ် နှင့်ဘဝအဘို့, ဒီကပါဝငျသမြှနှင့်အတူ။ သင်ပေါ်လာသော်လည်းနေရာမရရှိလျှင်သင်၌နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာရှိသည်။ စာတိုက်အလုပ်ရုံးသို့သင်ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းကိုသင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီးအချိန်တန်လျှင်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းကိုတန်ရာတန်ကြေးအဖြစ်တွက်ချက်နိုင်သည်မှာမှန်ကန်သည်။